GAALKACYO(P-TIMES)- Garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo, wuxuu kamid ahaa mudo dheer ilaha dhaqaale ee ay ku tiirsan tahay dawladda Puntland, waxaana horey looga daba jiray ama looga bixin jiray inta badan Dhaqaalaha ciidamada iyo howlaha maamulka dawladda looga baahan yahay ee gobalka Mudug.
Garoonkan, maalin kasta waxaa si maalinle ah uga dagi jiray duulimaadyo diyaaradeed oo toos ah uga yimaada magaalada Muqdisho iyo meelo kala duwan oo ay kamid yihiin gobada kale ee dalka.
Warsidaha PuntlandTimes wuxuu ogaaday in bishii ugu dambeysay garoonka hoos u dhac weyn oo mudo soo taagnaa uu wajahayay, waxaana hadda uu marayaa in todobaadkii oo dhan labo hal diyaarad oo sameysa labo duulimaad, soona marta Garoowe kana timaada Muqdisho ay kasoo dagto uun.
Maalin kasta in ka badan 8 Duulimaad diyaaradeed ayaa ka dagi jiray kana duuli jiray madaarkan Gaalkacyo, waxaana muhiim u ahaa isku socodka guud ee gobalada dalka, taas oo hadda noqotay mid gabaabsi ah.
Sababaha waqtigan keenay hoos u dhaca garoonkan oo aan dabagal ku sameynay waxaan ogaanay in ay ka mid yihiin burbur baaxad leh oo kajira garoonka, tartanka garoonka dhanka Koonfurta kuyaala kala dhaxeeya iyo canshuuraha tiradda badan ee la qaado.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in Diyaarad kasta oo timaada garoonka Gaalkacyo ay canshuur ahaan ugu waajibi jirtay ugu yaraan $1000 Dollar, halkii marba waxaana sii dheer rakaabka oo laga qaado lacagaha ay qaataan Shirkada gaarka loo leeyahay ee maamusha adeega ammaanka ee garoonka diyaaradaha.
Diyaaraduhu waxay hadda xooga saareen oo u wareegeen garoonka Koonfurta Gaalkacyo oo ay maalin kasta ka dagaan duulimaadyo toos ah oo kasoo duulaya Muqdisho, halka garoonka Waqooyigana haddii aad u baahato in aad ka dagto aad ku qasban tahay in aad raacdo duulimaad ah Garoowe ah, ka dibna ay kusoo laabato Waqooyiga Gaalkacyo.
Maamulka Garoonka oo aan la xariirnay wey ka gaabsadeen ka hadlida arrimahan, waxayna sheegeen in dawladdu go`aan ka qaadatay arrimaha dhismaha garoon cusub oo ay yeelato magaalada Gaalkacyo, laakiin kaas laftirkiisa oo aan raadinay waxaan helnay xogo balaaran oo ku wajahan halka uu ku dambeeyey.
Tanni, waxay uga dhigan tahay in ay waayi doonto waqti dhaw mid kamid ah garoomada muhiimka ah ee deegaanada Puntland, waxaana muuqata in furidii garoomada Boosaaso & Garoowe ay laftirkeedu qeyb ka noqotay hoos u dhaca garoonkan Gaalkacyo.
Dawladda Puntland, wali go`aan kama aysan soo saarin arrimahan kusoo wajahan garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo, xariiro kala duwan oo aan la sameynay dhinacyada ay khuseysana wey ka gaabsadeen in ay ka hadlaan.
Safwaan dahir says:
Waanka xumahay In laga day riyo Garoonkii ugu fiicana Soomaaliya marka laga yimado muqdisho iyo hargaysa waan waxa qabadlaanta u soo kordhiyeey Mr deni waxan Kula talin laha in udhiso garoonka, Hadii kale Waxan dawlada somaliya ugu baqayaa in ay garoonka waxa ka qaato waa isku xiraaha Soomaaliya waa qayb Kamida dhaqalaha soo gala mamulka puntiland
Deni diyaaradaha iyo rakaabka kuma khasbi karo in ay isticmaalaan garoonka gaalkacyo ama garoon kale’ba. Dadka gacanta ku haya garoonka iyo shacabka u dhashay gobolka ayaa hoos u dhaca keenay. Hadii ay door bideen in ay ka duulaan koofurta galkacyo iyo Garoowe oo ay garoonkoodii xaqireen maxay Deni iyo cid kale eeda u saarayaan. Markii ay garoomadu bataan tartan ayaa bilaamada oo garoomadu tartan ayey galaan. Cidii maamul iyo xifrad la timaada ayaa rakaabka leexsata. Diyaaraduna waxay ka dagaan goobtii rakaab leh. Reer mudug geljirenimo ayaa lagu xantaa oo lama jaan qaadi karaan umadaha ay tartanka kula jiraan.